Ndifumene izicelo ezininzi zolwazi malunga nokuba ungayifumana njani i-salts yensimbi engasetyenziselwa ukwenza umlilo ombala . Nalu uluhlu lwemithombo eqhelekileyo yale salti yensimbi. Ukuba izaluthi zisesimo samanzi, zenze iipenecone nje okanye izigodo okanye nantoni na ukutshisa kwi-liquide kwaye uvumele ukuba uphethile phambi kokusetyenziswa. Ukuba izaluthi zinobuqili, ukubethelwa kwakho kukugqwesa ukuzama ukuzinqumla ngotywala obuninzi uze uzisebenzise kumbane wakho womlilo.
Ungasebenzisa amanzi kodwa ulindele ixesha elide lokuma.
Umbala womlilo - Umthombo
I-Green - i-Boric acid mhlawumbi ingumthombo wakho ongcono "wobuluhlaza". I-boric acid kakhulu idayiswa njenge-disinfectant kwicandelo le-pharmacy yesitolo. I-Copper sulfate enye yetyuwa yesoyile eyenza umlilo oluhlaza . Unokufumana i- sulfate yethusi , ngokuqhelekileyo ihlanjululwe kwifom ye-liquide, kwimveliso esetyenziswa ukulawula i-algae kumachibi okanye ngamachibi.
I-White- Magnesium compounds ingayenza umbala womlilo ube mhlophe. Ungongeza ii-Epsom zetyu, ezisetyenziselwa iintlobo ezahlukeneyo zasekhaya. Ngokuqhelekileyo ndibona i-Epsom iitrothi ezithengiswa kwicandelo lezentengiso zezitolo ukuze zisetyenziswe njengesitya sobhebha, kodwa i-salts idla ngokungahlambuluki kwe-sodium, eya kuvelisa ilangabi eliphuzi.
Ephuzi - Umlilo wakho oqhelekileyo uya kuluhlaza, kodwa ukuba utshayela umbane ovelisa ilangabi eliluhlaza , umzekelo, unokuwuguqula uluhlaza uluhlaza ngokufaka i-sodium ityuwa, njengetyuwa yetafile eqhelekileyo .
I-Orange - I-calcium chloride ivelisa umlilo womlilo. I-calcium chloride ithengiswa njenge-desiccant kunye ne-agent-de-icing road. Qiniseka ukuba i-calcium chloride ayixutywanga kunye ne-sodium chloride okanye i-yellow yellow kwi-sodium iya kunqoba i-orange kwi-calcium.
I-Red- Strontium isalts ivelisa umbala obomvu obomvu.
Indlela elula yokufumana i-strontium kukuba uvule i-flare ebomvu, ongayifumana kwicandelo lezithuthi. Iingqungqelo zomgwaqo ziqulethe i-fuel and oxidizer, ngoko le nto yatshisa ngamandla kwaye ikhanya kakhulu. I-lithium ivelisa ilangabi elibomvu elimnyama, naye. Unokufumana i-lithium kwiibhetri ezithile ze-lithium.
Iingubo ezimhlophe ezimhlophe ezimhlophe zinguParple - Purple okanye violet zingaveliswa ngokungeza i-potassium chloride emlilweni. I-potassium chloride ithengiswa njengetyuwa lite okanye i- substituted salt in the spice section of the store.
Uluhlaza okomvu - Unokutshisa ngomlilo ohlaza okomhlaza we-chloride. Andiyazi into ekhoyo ngokubanzi ye-chloride yethusi. Unokuyivelisa ngokutshabalalisa ucingo lobhedu (lula ukufumana) kwi-asiatic acid (ithengiswa kwisakhiwo sokuthengiswa kwezakhiwo). Le nto yayiza kuba yimihlobo kuphela yokuphendula kwaye akuyonto into endiyincoma ngayo ngaphandle kokuba unamava amancinci khempi ... kodwa ukuba uzimisele, qhawula ucezu lobhedu kwisisombululo se-3% ye-peroxide ye-hydrogen (ithengiswe nje i-disinfectant) apho ungeze khona i-muriatic acid (i-hydrochloric acid) eyaneleyo ukwenza isisombululo se-5% se-HCl.
Indlela yokuhlambulula i-Sodium Chloride esuka kwiLatyuli
Ukuhamba ngeNdlela eWorld Wall eMzantsi Manhattan
I-Dickinson yeKholeji ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IziCwangciso zokuthetha zabafundi beNgesi
Indlela Yokubukela Umshicileli kwiWindows Phone yakho